ECN Forex Trading | Rite uru n'aka ECN / STP Forex Trading na FXCC
Home / Banyere / Banyere FXCC / Ụdị ahịa anyị
Dị ka onye na-agba ụgwọ gbasara ECN FXCC nwere Enweghị Ụlọ Ihe Njikọ. Ụkpụrụ ahịa anyị dabeere na nhazi (STP) na netwọk nke kọntaktị eletrik, anyị na-ezo aka na nke a dị ka model ECN / STP FX anyị. Ihe nlereanya ECN / STP bụ ebe a na-eziga iwu ndị ahịa anyị niile na ụlọ ọrụ ego na asọmpi dị iche iche, ka ha wee nwee ike ịlụ. Nke a na-emepụta ọdọ mmiri ndị a na-akwanyere ùgwù na-emepụta ọdọ mmiri anyị. Nke a ziri ezi, site na nhazi, na-ewepụ ego ọ bụla ma ọ bụ gbasaa ọkpụkpụ, ma hụ na ọ dịghị mgbe esemokwu dị n'etiti FXCC dịka onye na-ere ahịa na ndị ahịa anyị.
FXCC kwenyere na inwe ọtụtụ ndị na-enye ego na-enyefe ego bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mkpa anyị nwere ike ịnye ndị ahịa anyị n'ahịa ahịa na-arịwanye elu. N'ihi nke a, anyị na ọtụtụ n'ime ihe ndị kachasị: ụlọ ọrụ ego, nke nkwanye ùgwù na nke a kwadoro, ka anyị wee nwee ike hụ na ndị ahịa anyị niile na-erite uru asọmpi asọmpi na-agbasa 24-5 dịnụ, ọbụna n'oge ọnọdụ ahịa na-adịghị mma na mgbe a na-ebipụta data ndị dị egwu na mbipụta akụkọ.
The FXCC Ahịa Aggregator na-akpachapụ anya na-enyocha niile rịọ / jụọ (ịzụta ma na-ere) ahịa abanye anyị Usoro ECN na mgbe niile na-egosiputa ọnụahịa kachasị ọnụ ahịa na enye site n'aka anyị niile. Nke a na-eme ka ndị ahịa anyị rite uru site na egwuregwu kachasị mma nke Bid / Ask prices available on our trading trading trading. Usoro ego a na-emepụta ebe ndị ọkachamara na-azụ ahịa ka ọ bụrụ na ha nwere ahụmahụ ma na-enyekwu ohere maka ịzụ ahịa ahịa.
Nchịkọta nke nlereanya FXCC trading.
FXCC na-enye ndị ahịa ya ohere ịnweta ngwa ngwa ECN, bụ nke ndị ahịa niile na-enweta otu ohere ahụ, na otu ahịa mmiri mmiri, ebe a na-egbu ahịa n'egbughị oge, n'enweghị oge ọ bụla, ma ọ bụ ntinyeghachi.
N'adịghị ka ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ, FXCC adịghị ewere akụkụ nke ọzọ nke ahịa ahịa. Anyị anaghị ere ahịa megide onye ahịa: iwu, ịkwụsị ma ọ bụ njedebe na ndị ahịa ahịa niile na-egbu azụ azụ azụ na ndị ọzọ na ọdọ mmiri anyị.
Azụmahịa site na nlereanya ECN / STP anyị bụ ndị a na-amaghị aha, ndị na-enye anyị ego na-ahụ naanị iwu na-abịa site na FXCC.
Enwere ike iwepu ohere nke ịkwụsị ịchụ nta ọnwụ, ma ọ bụ gbasaa mmepe.
Dị ka Onye na-abụghị ndị na-eme ihe na nzuzo, ọ dịghị mgbe anyị na ndị ahịa anyị na-enwe mmasị. Enweghị ihe ọ bụla a chọrọ ka anyị gbaa, n'ihi ya, ọ dịghị mgbe ọ bụla a na-anwa anyị ịzụ ahịa megide ndị ahịa anyị.
Ọnụ ego ndị na-enweghị atụ na asọmpi asọmpi na-agbasa.
Inye usoro nhazi kachasị elu nke oge.
N'ebe a na FXCC anyị kwenyere na ndị ahịa anyị kwesịrị inwe ihe niile Ngwa ngwá ahịa forex ndị ahịa nwere ọganihu chọrọ ha. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-enye ndị ahịa anyị forex ohere Software MNTUMMA nke 4.
Ala anyị ECN nwere ikike nyere anyị aka ịnye ndị ahịa, ndị maara MetaTrader, nhọrọ iji nọgide na-eji ha eme ihe trading platform trading na gburugburu ECN / STP.